Maxay tahay sababta xisbiyada mucaaraadka u dalbadeen xil ka qaadista Francisco Madeira? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxay tahay sababta xisbiyada mucaaraadka u dalbadeen xil ka qaadista Francisco Madeira?
Maxay tahay sababta xisbiyada mucaaraadka u dalbadeen xil ka qaadista Francisco Madeira?
Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa shalay Ururka Midowga Afrika ka codsaday iney badalaan ergayga u fadhiya Muqdisho kaas oo ay ku eedeeyeen inuu si aad ah ugu milmay siyaasadda kooxda xukunka heysa.
Francisco Madeira wuxuu wajahayaa eedeyn kulul, inkastoo uusan ka jawabin haddana waxaa la saluugay qaabka uu u shaqeeyo.
Madasha waxey ergaygaan ku eedeeyeen inuu garab u noqday Dowladda, isla markaasna raalli ka noqday faragalin ay kooxda talada heysa ku sameysay hab maamuuska doorashooyinka maamul goboleedyada.
Afhayeen Madasha Xisbiyada Qaran Cabdirisaaq Axmed Shoole ayaa ka dalbaday ergayga inuu si cadaalad ah u shaqeeyo mar uu gudbinayay dalabka shaqada looga eryayo.
“Wakiilka Midowga Afrika waa mas’uulka ugu sarreeya hawlgalka AMISOM, wuxuu dalka ku joogaa Sharci iyo heshiis, waa mamnuuc in astaanta ciidanka AMISOM ay cid kale xirato,” ayuu afhayeenka u sheegay idaacadda VOA.
“In ciidamo aan ka mid aheyn kuwa AMISOM lagu faragaliyo doorasho maamul goboleed waa wax xad dhaaf ah, waxaana ognahay in AMISOM ay wadanka u joogaan la dagaalanka kooxaha argagixisada,” ayuu mar kale yiri.
“Xadgudubyada la iska indho-tiray ay ciidamada Itoobiya ku hayaan madax-banaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya waxaa qeyb ahaan mas’uul ka ah guul-darrada wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Francisco Madeira, kaasi oo laga rabay inuu xaqiijiyo in sumcadda Amisom aysan waxyeeleyn damac juqraafi siyaasadeed ee xubin ka mid ah.”
Madasha Xisbiyada Qaran waxey walaac xoog leh ka qabaan inuu dhex-dhexaad ka noqon waayo doorashooyinka qaran ee la filayo bilowga sanadka dambe, ayaga oo sheegay in ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ujeedka kama dambeysta ah ee laga leeyahay uu yahay in lagu faro-geliyo doorashada federaalka ee sanadkan dhaceysa.
Previous articleXOG: Wasiir Janan Oo Tegay Nairobi Wada Hadalna La Furay Villa Soomaaliya
Next articleDaawo sawirada:Siciid Dani Oo Maanta Ugu Dambeyn Ku Biiray Urur Siyaasadeed Caan Ah
DHAGEYSO:Maxaa ka jira in taliye ku-xigeen ka tirsan NISA uu fuliyey qaraxii Howlwadaag
Sawirro: QM oo Muqdisho keensatay ciidamo cusub kadib qaraxii uu ka bad-baaday James Swan
Dhageyso:- Taliska Booliska Soomaaliya oo Mas’uuliyiin u xir xirtay musuq maasuq
Kiiska Ca’isha Ilyaas oo waji kale yeeshay iyo nin si rasmi ah u qirtay inuu kufsaday
Golaha wasiirada Puntland oo todobaad kadib wajahaya Tijaabadii ugu adkeyd
DAAWO: Boqol iyo lix qof oo tahriibayaal ah kaligay baa ka soo hadhay – Warayisi MURUGO LEH
Daawo:Sanbalooshe waxa Farmaajo xilka iga qaaday waa soo xir madaxweyne Hawiye udhashay oo lagu magacaabo…
DHAGEYSO:Xildhibaan Fiqi oo weeraray dowlada soomaaliya kana hadlay arintii Suuqa bakaaraha